Amehlo Abangane Bethu
Inja endlini ongenza imisebenzi ehlukahlukene. Kungaba unogada ukuze banakekele izingane, ukusiza ilungu lomndeni ongaboni kahle, kodwa ngaso sonke isikhathi umngane. inja yakho kungenzeka nesitha, noma umphathi, ngoba lokho kwakuyosho ukuthi emfundweni isilwane wena namaphutha sina. Ukuvimbela kwanda ngokuphazima kweso. Kwanele ukuba zifunde izincwadi ezikhuluma ngale ndaba, futhi isebenzise lezi izincomo kuwo. nzima kakhulu zikhule isilwane banempilo futhi bajabule ukuthi kuyokulethela injabulo, kodwa ukukhathazeka ngempilo yakhe ngeke usidle sonke isikhathi sakho khulula.
Ukuze ube wodwa eziyinkimbinkimbi isifo isilwane, ukugcina ukuziphatha sakhe futhi libonakala eduze ngokwanele. Inja Umsebenzi, isifiso sakhe, ekhaleni uzokutshela abantu abambalwa, okungenani ajwayelekile kancane ne physiology abangane bethu abane-ezinemilenze. Nokho, abantu abaningi ukhohlwe Musa nje abheke amehlo sesilwane unaka ukukhethwa ezisemagumbini kwamehlo isilwane sakho. Angels amehlo ngoba izinja - umkhiqizo omusha ngesimo okuphakelayo izithasiselo yakhelwe ukuba sixoshe isilwane izinkinga ezihlobene ne Ukubhidliza ngokweqile. ukusetshenziswa njalo lokhu-ejenti e engu-izinyanga 9 ongaqeda ngokuphelele okuvela kuyo ibala phezu isilwane noboya iso emakhoneni noma naseduzane komlomo kusukela ngamathe.
Uma amehlo inja babe obomvu, ngokuvamile uphawu eliqinisekile isidingo kokungenela yezokwelapha ekuseni. I njalo iningi isifo ocular kulezi izilwane - conjunctivitis. Ngesikhathi isifo efanayo abavusa ebusweni engaphakathi ijwabu leso. Izimpawu zalesi sifo yilabo nkomba ibhanyabhanyaza okwandile okusheshayo futhi lacrimation kunyuke ne isikhwehlela. Izimbangela conjunctivitis zande, kodwa ezivame kakhulu - esibalwa e inja iso ukungcola, kwegciwane kanye iguliswa impova (ezinhlamvu) emoyeni. It is kakhulu hhayi Kunconywa ukuba ake lesilwane ukubeka ngefasitela imoto uma ushayela, kusukela ematfuba conjunctivitis isifo kuleli cala - kuyinto esiphezulu.
Angels Eyes for izinja nge kwalokho njalo ukudla kungaba ukuxazulula inkinga Ukubhidliza okusezingeni eliphezulu futhi staining ezizungeze amehlo phezu noboya sesilwane sakho. Ngesikhathi inhliziyo yalesi okufakiwe kuyinto tylosin ngemithi elwa namagciwane, falling in the class efanayo kanye ajwayelekile kithi eritrometsinom.
Silicon sucker - into Irreplaceable emnothweni
Thermomug: kanjani ukukhetha ilungelo? Izinhlobonhlobo esikhulu sokudla
Indlela ukukhetha ephephile ingane esihlalweni ngebhayisekili?
Grater imifino - indlela ukukhetha
Ifolda-isibopho. Umlando sendalo kanye amathemba
Izinkinga zamazinyo kungaba ezahlukene
"Dodge Calibre": Tuning, incazelo, emihle nemibi izimoto
Tile Ceramic for ekhishini ngaphansi kwezihlahla
Pizza ne amakhowe: ongakhetha test, ukugcwalisa sauce ezifanele kakhulu
Mikhail Shemyakin. Imidwebo kanye izikhumbuzo
Kanjani ukufunda ukuhlonza usayizi osonhlamvukazi bodwa?
Indlela ukukhetha lulwimi ngendlela elukhuni lumbosacral corset?
Isikhathi bayashintshana ekufukameleni we wayencisha umuntu: incazelo, izici kanye nezincomo
Cwaningo postgraduate - Iyini? izifundo postgraduate: Izici
Indlela Yokukhetha Cases Iphone?
Electric phansi ekhazimulayo ngezandla
Propylene glycol. Ingozi njengoba okuhle, kukhona.